Vidio 3 - Medicalzọ Ahụike (Nkebi nke 1) | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
Vidio 3 - Medicalzọ Ahụike (Nkebi nke 1)
Dysphoria okike, Medicalzọ Ahụike / Site mere
3 vidiyo - Dysphoria nke Nwata.
Medicalzọ Ahụike Maka Mmegharị Mmekọahụ (Akụkụ 1).
Ọ dị mma, ya mere okwu a bụ isi ihe na-eme ụmụaka. Kedu ihe mejupụtara usoro ọgwụgwọ nke ụmụaka nke nwere ike iweta n'ụlọ ọgwụ okike dysphoria. A na-ebido ha ugbu a na usoro ọgwụgwọ akwadoro, nke a maara dị ka Dutch Protocol, n'ihi na ọ na-eto site na ọrụ nke emere na Holland ọtụtụ afọ gara aga. Yabụ, anyị ga-ele anya na nke ahụ. Ma dị nnọọ ịtụle. Na nnọkọ ikpeazụ banyere ọrịa ọrịa, anyị na-echegbu onwe anyị na enwere ike ịnweta pasent anọ nke ụmụaka metụtara, mana anyị hụrụ etu iwu a si dị njọ. N'agbanyeghị nke ahụ, e jiri ya tụnyere nsonaazụ ya, ihe ndị ama ama ama na-eto eto, enwetara anyị obi ike n'ihi na ọ bụrụ n'ezie pasent anọ nke ụmụaka nwere ọrịa dysphoria nwoke na ọnụ ọgụgụ nke 0.002 pasent dị ka edere, ọ bụghị nke m, kama site na Akwụkwọ Diagnostic na Scientific Manual. , nke ahụ pụtara na pasent iri itoolu na itoolu nke ụmụaka ga-akawanye mma ma pụta site na oge uto ma ọ bụrụhaala na anyị esoghị ha na-aga.
Yabụ kedu ka anyị nwere ike isi tinye aka na ha? Gịnị ka ọ gụnyere? Aga m abanye na nkọwa nke a n'okwu na-esote, mana anyị nọ na mmeghe ugbu a. Enwere ụzọ dị oke egwu. Enwere m ike ịsị n'oge a na anaghị m elekere maka obere mkpagbu nwatakịrị ahụ nwere mgbagwoju anya banyere ụdị nwoke ọ bụ? Anaghịkwa m eleda anya n’otu ntabi anya ka m na-enwere ọmịiko na nchegbu ndị mụrụ m ga-enwe. Anaghị m belata ihe niile kachasị mma n'ụwa nke ndị dọkịta na-anwa itinye aka. M ga-ekwe ka ha na-anwa ime ihe kachasị mma ha nwere na nsogbu dị oke njọ.
Okwu m bụ na nke a abụghị okwu gbasara ndu, mana nke a bụ okwu gbasara mmụọ, anyị ewepụtala ụzọ nke isonye ụmụaka na nsogbu mmụọ. Dịka ọmụmaatụ, anorexia nervosa. Anyị na-emere nwata ahụ ọmịiko, anyị na-eme ihe niile anyị nwere ike ime, anyị na-adụ ndị nne na nna ndụmọdụ, anyị na-elekọta nwatakịrị ahụ n'ihi na anyị maara ihe ọghọm dị na ya, mana anyị anaghị agwa ya nke ọma, na ha bụkarịrị ụmụ agbọghọ, ị mara abụba ma gị Ọ ga-abụrịrị na anyị ga-efulata, anyị agaghị ewepụkwa akpụkpọ anụ ma tinye ụfọdụ eriri afọ iji nyere aka. Mana n'ezie, nke a bụ ụzọ ọhụụ eji abịakwute nsogbu uche nke akpọrọ ụzọ ahụike n'ihi na ihe ndị otu ahụike na-eme ụfọdụ n'ime ha bụ, ha na-asị, “Ọ dị mma, ee, apụrụ m ịhụ na ị na-echegbu ma ị bụ nwa agbọghọ ma ọ bụ nwa nwoke. Ee, i nwere ihe mere ị ga-eji bụrụ maka na ị bụ nwa agbọghọ, ma ọ bụ na ị bụ nwoke nwoke, ugbu a anyị ga-etinye aka site na ịnye gị ọgwụ, na n'ezie, akpụkpọ anụ ga-enyere gị aka ikwenye na nke a, "n'ihe m ga-ekwu, bụ aghugho. Nke a bụ nsogbu njirimara mmadụ.
Anyị agaghị achọ ime ka ị kwụsị ya na nkà na ọgwụ niile anyị nwere n'ọrịa nke uche, mana anyị ga-esonye na nke a ma nyere gị aka ịgbanwe na okike ị chere na ị bụ. Nke ahụ bụ okwu.
Yabụ kedu ka ọ si amalite? Ọ na-amalite site n'ịgba ume maka mmekọrịta mmadụ na ibe. Ọ mara mma, ị gwara ya, "I chere na ị bụ nwa agbọghọ? Ọma. Anyị ga-agbanwe aha gị, anyị ga-agbanwe nnọchi okwu gị, anyị ga-etinye gị n'uwe, ị gaa ụlọ mposi ndị a na ihe ndị ọzọ ma anyị ga-atụ aka na gị, ndị isi ụlọ akwụkwọ ga-atụ aka n'ebe ị nọ, anyị ga-anwa ma mee ka anyị kwenye Nne nne ka ị soro nke a, nke mere na ndị isi niile dị na ndụ gị na-ekwusi ike na ị bụ nwanyị n'ezie, mgbe a mụrụ ya, ọ gosipụtara ọ bụla na ị bụ nwoke. Ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ gbaa gburugburu. ”
Yabụ, enwere njirimara mmadụ. Lee ka nke ahụ ga-esi bụrụ ihe mgbagwoju anya mgbe ndị isi niile na-ekwuzi, sị, “Ọ bụghị, ihe ị bụbu bụ ka e chere na ị bụbu.” Kedu ka nke ahụ si agbagwoju anya? Karịsịa ụmụaka nwere ọrịa ọgụgụ isi, anyị ga-abanye na nke a n'okwu na-esonụ. Anyị na-aga ebe a na pantomime nke na-adabereghị n'eziokwu na anyị na-eduga nwatakịrị a na ntụziaka. Ya mere, gịnị na - eme ma ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ amata na mberede, “Ọ dị mma, kpọgidere gị na nke abụọ, abụghị m nwa agbọghọ. Abụ m nwata nwoke! ” Kedu ka ọ ga - esi, olee otu onye a ga - esi laghachi? Nke ahụ bụ okwu. Oleekwa mmebi emebi site na njirimara ụgha a n'ụzọ?
Yabụ, ị nwere ike ịsị na ikike onye ọ bụla na-aga n’ihu na pantomime nwere ihe egwu dị na mmụọ. Nwere ike ikwu na enwekwara ihe egwu ahụike n'ihi na ihe ọ ga - eduga na mgbe ahụ bụ mmalite nke nzọụkwụ ọzọ, nke bụ ndị na - egbochi hormone. Anyị ga-elebanye anya na ha n'uju n'ihi na a ga-ele ha anya n'ụzọ zuru ezu, mana ọ pụtara n'ụzọ doro anya na enwere ndị dibia bekee bụ ndị maara ihe nke ọma iji mepụta kemịkal nke dị ka kemịkalụ nke na-ebute mmepe nke ogo mmadụ. Ject gbanye ihe a na ọ na-egbochi ya ka nwatakịrị ahụ niile na - eto eto wee kwụsị. Ma n'ezie, ihe karịrị nnọọ nke ahụ.
Nwatakịrị nke ọdụdụ na Australia dị afọ iri na ọkara. Yabụ, ha na-enye nke a n'oge uto. N'ihi gịnị? Iji nye nwatakịrị ohere ịmatakwu onye ọ bụ na ọ ga-eme n'ọdịnihu. Dị ka a ga-asị na nwatakịrị ọ bụla dị afọ iri na ọkara ga-amata ihe ọ chọrọ ịbụ na ụmụaka ole ọ chọrọ ịmụ na ihe ndị ọzọ. A na-enye ya na iri na ọkara ma ọ na-arụ ọrụ. Ọ na-akwụsị oge uto, mkpọtụ, mana ọ na-akwụsị ọtụtụ ihe ndị ọzọ dịka anyị ga-ekwu maka ya na-esote okwu. Nke a bụ vidiyo mmeghe.
N'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị, nwatakịrị ahụ nwere ike inye homonụ nwoke na nwanyị nke bụ homonụ nke nwoke enyere nwanyị iji kpoo àgwà abụọ. Ọ dịbu adị, ma a ka nwere n’eziokwu, ntụnye mba n’abụ na-enye ndị a mgbe ha dị afọ iri na isii. Ma a na-enye ha ugbu a na nwata. Dabere na mgbagha a, ọ dị mma, ịchọrọ ịbụ nwa agbọghọ ma ọ bụ ịchọrọ ịbụ nwa nwoke, ọ dị mma, anyị ga-egbochi oge uto gị. Ugbu a nwatakịrị a agaghị eto, ọ ga-anọgide na-eto eto, mana ndị ọzọ nọ ya gburugburu na-eto eto. Yabụ, kpọgidere, ọ na-eche na ọ bụ nwa agbọghọ, mama na nna chere na ọ bụ nwa agbọghọ, ụlọ akwụkwọ, onye ọ bụla, na-eche na ọ bụ nwa agbọghọ ya mere na ọ jọgburu onwe ya ịhapụ ịhapụ ya ịmalite ịghọ nwa agbọghọ, dịka ndị ọgbọ niile. Yabụ, dị ka mgbagha a si dị mkpa, mkpa ọmịiko, iji nye homonụ mmekọrịta nwoke na nwanyị na nwatakịrị. Enwere nsogbu na nke a ka anyị ga-ekwu maka ya. Nke a bụ mmeghe.
Gịnị meziri? Enwere ịwa ahụ. Ugbu a, nkwenye mba ụwa bụ na ọ nweghị ịwa ahụ a na-apụghị ịgbagha agbagha na-eme n'okpuru afọ iri na asatọ. Agbanyeghị, nke a bụ sophistry, ụmụ nwanyị ise anyị maara na Australia n'afọ ndị na-adịbeghị anya, nwere mastectomies ndị ọzọ. Abụọ na iri na ise, otu na iri na isii na abụọ na iri na asaa. Ha na-arụ ụka, nke ọma, nke a bụ ịwa ahụ kacha elu. Nke a abụghị ịwa ahụ a na-apụghị ịgbagha agbagha. Dị ka a ga - asị na echiche niile nke inye ara ara pere mpe n'ihi na, ọfụma, anyị ga - enweta implants ọ bụla ma mee ka ọ dị ka nwa agbọghọ ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịgbanwe obi ha. Yabụ, n'okpuru sophistry a bụ ịwa ahụ kachasị elu, nkwanye okwu a, mastectomy a, a na-ekwu na ọ gaghị agbanwe agbanwe, ịwa ahụ kachasị elu na-eme.
Ala ịwa ahụ, anyị ga-ele anya na a bit na nkọwa ndị ọzọ, ihu ọma, pụtara mgbatị. N'ime nwoke na-eke ikpu, ibugharị mmamịrị ahụ. N'ime nwanyị ọ na-emechi ikpu, na-anwa ịmepụta mpempe akwụkwọ na nsị. Ọ bụ nnwale siri ike, nke siri ike, nke anakpo, iji mepụta mpụta, mpụta nke akụkụ ahụ na ụdị nsogbu ịwa ahụ na-aga n'ihu. Mana nke ahụ, echeghị m na a na-eme n'Australia n'okpuru afọ iri na asatọ. N'ezie, n'America m ghọtara na emeela nwata, na onye ọ bụla nwere ike ịga Thailand, ebe ị nwere ike ịme ya, ikekwe n'oge ọ bụla.
Oge ikpeazu nke a bụ nlekọta ahụike oge niile. Ugbu a, ọ bụrụ na ị na-enye nwatakịrị mmekọahụ na-ahụ maka mmekọahụ, dịka ọmụmaatụ, enwere nsogbu niile dị na ya. Ọbara mgbali elu, ọbara gbara ọkpụrụkpụ, thrombosis, ụdị nsogbu dị iche iche. A ga-enyekwa ọgwụ ndị ahụ n'oge ndụ ha niile. Ọ bụrụhaala na nwatakịrị ahụ chọrọ ịbụ nwa agbọghọ ma ọ bụ nwa nwoke, ọ ghaghị ị toụ ọgwụ, homonụ, ha enweela mmetụta dị mma ha. Yabụ, dọkịta ga-etinye aka na ndụ nwata ahụ niile.
N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na ịwa ahụ enwere mgbe ahụ echiche na ị nwere ike ịmepụta oghere dị ka ikpu ma ọ nweghị ya chọrọ imechi bụ echiche na-enweghị isi n'ihi na ọ bụrụ na ị mepụta oghere, ahụ adịghị amasị oghere artificial wee mee ihe kachasị mma mechie ha. Yabụ, na enwere usoro, oge ụfọdụ, ịwa ahụ ịwa ahụ na ịwa ahụ. Ọ bụghị otu ịwa ahụ na ọ bụ ya, ị pụọ ma ugbu a ị bụ nwa agbọghọ ma ọ bụ ugbu a ma ọ bụ na ị bụ nwoke. Ihe niile bụ na ụzọ ahụike a nwere nnukwu nsogbu, ọ na-eduga na ndụ ndụ ahụike.
Yabụ, gịnị kpatara ya? A ga-enwerịrị ihe akaebe. A ga-enwerịrị ihe kpatara nke a. A ga-emerịrị ihe ndị a niile, n'ezie, site na laabu na anụmanụ buru ibu na ịwa ahụ na usoro sayensị. N’ezie, mgbe anyị na - achọ ụdịrị ihe ahụ pụrụ iche iji chọpụta ma ọgwụ mgbochi ọhụụ adịghị mma ma ọ bụ na ọ nweghị nchebe, anyị na - enye ya ụmụ anụmanụ, anyị enyocha ya, anyị na-atụle ya na n’ikpeazụ, anyị nwere ọnwụnwa. Anyị kpuo ìsì, ule ọnwụnwa, ụdị ihe niile. Ọ na-arụ ọrụ? Ọ dị mkpa? Na n'ikpeazụ, anyị na-enweta ihu ọma. Ee, nke a enwetala ọgwụ, sayensị, na - enyere anyị aka.
Vidio 3 – Pzọ Nlekọta Ahụike Maka Mmegharị Mmekọahụ (Akụkụ 1). - Pịa> Iji budata PDF ebe a.